August 20, 2020 – Xorriya Online
Mareykanka oo qaswadayaal ku tilmaamay Axmed Madoobe iyo Saciid Deni
Dowlada Mareykanka ayaa sheegtay iney ka shaqeeysay sidii aragti loo wada dhan yahay looga wada hadli lahaa miiska shirka Dhuusamareeb 3, balse aysan wax ka qaban karin kuwa ka maqan, ayadoona isla waqtigaas qaswadayaal ku tilmaantay. Qoraal ay bartooda Twitterka soo dhigtay Safaarada Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu yiri; “Qaswadayaasha diidan ka qeyb galka shirka […]
Baaritaanka weerarkii xabsiga dhexe ee Xamar oo lasoo bandhigay iyo 27 qof oo loo soo xiray
Guddiigii loo xil saaray Baaritaanka weerarkii August 10 ka dhacay gudaha xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho, ayaa kulan ay maanta la yeesheen sii hayaha Ra’iisul Wasaaraha dalka, mudane Mahdi Maxamed Guuleed, waxay ku soo bandhigeen warbixin ku saabsan natiijadii usoo baxday baaritaankii ay sameeyeen. Guddiga ayaa intii ay baaritaanka wadeen waxay ogaadeen in August 08, […]
Wasiir Axmed shide oo noqday wasiirka maaliyadda ee Afrika ugu wanaagsan
Majaladda African Leadership Magazine ayaa Wasiirka Maaliyadda Itoobiya Axmed Shide u aqoonsan tahay inay siiso Billadda Wasiirka Maaliyadda ee Afrika ugu wanaagsan sannadkii 2020. War-murtiyeed ay Majaladdu Shalay soo saartay waxay ku soo bandhigtay Madax iyo Masuuliyiin kala duwan oo isugu jira Madaxda Hay’adaha Maaliyadda ee Afrika ee ay u aqoonsantay kuwii ugu wanaagsan sannadkan […]
Ra’iisul Wasaaraha Pakistaan Imarn khan oo sheegay ineysan aqoonsan doonin Israel
Ra’iisul Wasaaraha Pakistaan Imran Khan ayaa sheegay in Dalkiisa Pakistaan uusan marnaba aqoonsan doonin Israel, asigoona shuruud adag ku xiray aqoonsigaas. Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay qaabka kaliya ee ay Israel dal ugu aqoonsan karaan ay tahay in halkaas ka dhalato Dowlad Falastiini ah taasoo ay raali kawada yihiin shacabka Falastiin. Hadalka Ra’iisul Wasaaraha Pakistaan ayaana […]
Degdeg: Koox burcad badeed Soomaali ah oo afduubtay markab Imaraadka ka yimid
Burcad badeed Soomaali ah ayaa afduubteen markab laga leeyahay dalka Panama balse badeeco usoo siday magaalada Muqdisho. Marka oo dhawaan kasoo baxay magaalada Dubai ee Imaaraatka Carabta ayaa kusoo wajahnaa magaalada Muqdisho balse intii uu biyaha Soomaaliya soo dhexmaraayay ayaa waxaa afduub u geysteen kooxo Burcad Badeed ah. Burcadaan ayaa la sheegay inay ahaayeen lix […]
Hogaamiya Mucaaradka Ruushka ee Alexel Navalny oo la sumeeyay
Hogaamiyihii Mucaaradka wadanka Ruushka Alexei Navalny ayaa lagu soo waramauaa in la sumeeyay asiga oo hada ku jira xaalad halis ah. Hogaamiyaha ayaa wuxuu ka soo duulayay dalka Seberia isagoona u soo socday magaalada Moscow ee Caasimada Ruushka balse xaaladiisa caafimaad ayaa halmar is badashay asigoona loola cararay isbitaalka. Alexei Navalny ayaa waxaa looga shakisanyahay […]
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobe oo maanta ka shiraya arimaha Soomaaliya
Golaha Ammaanka ee qaramada Midoobe ayaa maanta kulan deg deg ah ka yeelaneyso xaalada Soomaaliya taasoo marxalasii gala guurka ku gudo jirto. Kulanka Golaha Ammaanka ayaana waxaa diirada lagu saari doonaa xaalada doorasho ee uu Dalka Soomaaliya gali doono dhawaan ayadoona kulankaan ay soo xaadiri doonaan beesha caalamka dalalka daneeyo arimaha Soomaaliya. Kulanka ayaa waxaa […]
Ciidamada Iiraan waxay shaaca ka qaadeen maanta oo Khamiis ah inay qabteen markab Imaaraatka laga leeyahay kadibna ay xireen shaqaalaheeda ayagoona ku eedeeyay ganacsi sharci darro ah kaasoo ay ka sameynayeen biyaha dhulka Iran. Hadal qoraal ah oo ay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Iiraan maanta soo saartay ayay ku tiri, “Isniintii Agoosto 17, Ilaalada Xeebaha […]
Wasaarada waxbarashada oo dalka ka ceyrisay Agaasimihii hey’ada CARE
Qoraal kasoo baxay xafiiska sii hayaha wasiirka waxbarashada Cabdullahi Goodax Barre ayaa lagu faray Cabdullahi Imaan oo ahaa agaasimihii hey’adda CARE inuu dalka ka baxo, kana shaqeyn karin. Imaan ayey dowladda federaalka ah ku eedeysay inuu sameeyey meel ka dhac ku aadan siyaasadaha waxbarasho ee Muqdisho isla markaana uu abuuray qalqalgelin iyo kalsooni darro dhexmarta […]